Amaxabiso eGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL sele avuza | I-Androidsis
Iifowuni ezintsha zikaGoogle eziphakathi, IPixel 3a kunye nePixel 3a XL sele zizakufika. Kulindeleke ukuba nge-7 kaMeyi kwenziwa intetho kwezi modeli zintsha. Bamele ukungena kwegama laseMelika kwinqanaba eliphakathi. Ezinye iifowuni ezifika ngokuyinxenye ngu intengiso embi kwesizukulwana esitsha seePixels.
Kwezi veki bekukho amarhe amaninzi kunye nokuvuza malunga neefowuni ezintsha zikaGoogle. Inyaniso, Sele siyazi inxenye yeenkcukacha kwezi Pixel 3a kunye nePixel 3a XL. Ngoku, angathini amaxabiso ezi zixhobo zihluziwe uphawu lwephakathi. Yintoni esinokuyilindela?
Ezi fowuni zimbini zorhwebo lwaseMelika zifikelela kwinqanaba eliphakathi kunye naphakathi kwepremiyamu. Ke ngoko, asifanele silindele iifowuni ezingabizi kakhulu ezivela kwinkampani. Kwakhona kubonakala ngathi zombini iPixel 3a kunye nePixel 3a XL iya kuba neenguqulelo ezininzi zokugcina, kuzo zombini iimeko ezingama-64 kunye ne-128 GB eqinisekisiweyo. Amaxabiso enguqulo engama-64GB avelisiwe. Kodwa sele besishiya sinoluvo lokuba silindele ntoni.
Ukusuka kwinto efundiweyo ngoku, IPixel 3a iza kufika ngexabiso leedola ezingama-399, apho kutshintsho malunga ne-355 euro. Nangona kunjalo, inyani kukuba kunokwenzeka ukuba ifowuni izokwaziswa eSpain ngexabiso le-399 euros, njengoko iqumrhu lihlala lisenza kwiimeko ezininzi. Ngokubhekisele kwimodeli enkulu, enokufikelela kwinqanaba eliphakathi kuluhlu, inexabiso eliphezulu. Kwimeko yakhe yeedola ezingama-479 (malunga nee-euro ezingama-428 ukutshintsha).
Ngamaxabiso asezantsi kunalawo inkampani ihlala isishiya kwiifowuni zazo. Kodwa kunokwenzeka kubasebenzisi abaninzi zibiza kakhulu kunokuba bekulindelwe. Ziyimodeli zoluhlu oluphakathi. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba ezi fowuni zibonakala zibiza kakhulu. Ingakumbi ukuba sizithelekisa nezinye iimodeli ezikweli candelo lentengiso, apho sinokubona amaxabiso asezantsi, kwiimeko ezininzi nangaphantsi kwe-euro ezingama-300. Ke oku kuya kwenza kube nzima kubo ukuba baphumelele kwintengiso. Ubuncinci ukuba la ngamaxabiso asemthethweni. Kuyabiza kakhulu kuluhlu oluphakathi kwi-Android namhlanje.
Ngethamsanqa ngekhe silinde ixesha elide ukufumana olu luhlu lweefowuni. Ukusukela ukunikezelwa okufanayo kubhiyozelwa ngoMeyi 7. Nangona sinezinto ezininzi ezivuzayo kwezi yure zidlulileyo. Ke nangaphambi kwale ntetho siza kuba sinedatha eninzi malunga noluhlu lwePixel 3a kunye nePixel 3a XL. UGoogle uyaqhubeka nokuva ubunzima bokuvuza, njengakwiGoogle Pixel 3 kunyaka ophelileyo.
Ucinga ntoni ngamaxabiso ekucingelwa ukuba anezi fowuni? Ngaba ucinga ukuba zilungile ngokujonga iimodeli eziphakathi kuluhlu lwe-Android namhlanje? Ngaphandle kwamathandabuzo, ngamaxabiso anokwenza kube nzima kwesi sizukulwana ukuthengisa kakuhle kwaye sincede uGoogle. Inkampani ikwenze yacaca ukuba olu luhlu oluphakathi luza kuba Isiphelo sonyaka ophelileyo sithengisa kakubi. Ngenxa yokhuphiswano oluphezulu okwangoku kuluhlu oluphezulu, ilawulwa ziimpawu ezintlanu.
Kodwa phakathi phakathi ku-Android kukhuphisana ngakumbi. Elona candelo linabantu abaninzi, apho sineemodeli ezininzi, nalapho kukho ukhuphiswano olungakumbi. Icandelo elibaluleke kakhulu, yiyo loo nto sibona iimveliso ezinje ngeSamsung zivuselela lonke uluhlu lwazo oluphakathi kwezi nyanga, ukuzama ukubuyisa eli candelo kunye nokulawula intengiso. Uluhlu oluphakathi sisiqingatha apho ixabiso linendima yokumisela. Into apho ezi Pixel 3a kunye nePixel 3a XL zingayi kwenza kakuhle. Ke kunokwenzeka ukuba azibonwa njengeefowuni zomdla ngabathengi abaninzi. Ngomhla we-7 kaMeyi siyakususa amathandabuzo kwaye kwiinyanga ezimbalwa ezizayo siza kubona ukuba ukubheja kukaGoogle kuyajika njengokulindelwe yinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ukucoca amaxabiso kwiGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL
I-LG V50 ThinQ 5G sele inomhla wokukhutshwa
IHuawei P Smart Z: IHuawei yokuqala enekhamera ebuyisekayo